Sidee waxa aan xirto saameeyaa our niyadda - Rule News
Sidee waxa aan xirto saameeyaa our niyadda
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Sidee waxa aan xirto saameeyaa our niyadda” waxaa lagu qoray by Daniel Glaser, waayo Observer The on Sunday 13 December 2015 09.30 UTC
Labisashada xisbiyada Christmas ka dhigi kartaa in aad sexier, kalsooni dheeraad ah ama aad is-miyir qabo. -dhacyada Bulshada iyo sartorial uga haysaan, laakiin waxa laga yaabaa in aad ma oga waa in aad doorashada ka dhisan bedeli kartaa jidka maskaxda jirka fahamsan.
Related: Ka furaya qarsoon ee carruurnimada
nafsiga The American William James qoray 1890 ku saabsan qof dumar ah oo uu ku arkay isagoo xiran koofi la baal dheer ku dul kuwaas oo ay dabiicadda igu ridin intii ay soo galeen qolka, iyada oo qayb ka ah haddii baal waxay ahaayeen jirkeeda. tijaabo neuroscience Modern tan sii sahamiyey: haddii daanyeer a heysta qalab, waxaa la muujiyay in maskaxda koobay qalabka sidaa in ay ku dhawaad ​​qayb ka mid ah jirkaaga. Tani waxay u ogolaaneysaa daanyeer ah in la isticmaalo qalab ah dextrously, sida haddii ay ahaayeen farta ku dheer oo dheeraad ah-.
Saamaynta isku lagu dareemi karaa dhar-tustuska, ama Bir ah sixir of dhar cirfiid a - kordhin this jidhkeenna laga yaabaa noo guurto iyo dhaqmaan si ka duwan. Tani waxay sidoo kale waxaa laga yaabaa in sababta ay noo suurta gashay in la wado, sida baabuur oo dhan noqdo cidhifyada jidhkeenna - laakiin waa ay fiican tahay ma in ay isku dayaan in ka dib markii xisbiga.
Dr Daniel Glaser waa agaasimaha Science Gallery at King ayaa College London
← Sidee dadka ka adkaan doonaa Mars iyo wixii ka dambeeya Amazon jiidayo hoverboards cabsi ammaanka →